Shiinaha Customized Daabacan daabacaadda bac saarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Bacda dugsiga > Bacda dugsiga la daabacay
Bacda dugsiga la daabacay
(1) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamkani gebi ahaanba waa bilaash. (2) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saarka badeecada dalabka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro howsha wax soo saar, si aad si dhaqso leh u fahmi karto heerka amarka (3) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh. (4) Si adag loo xakameeyo tayada wax soo saarka oo aan kuugu soo dhiibo iyadoo la adeegsanayo 100% pass pass (5) Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo suurtagal ah si aan kuu badbaadinno kharashyada.
Sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.:
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucksacks, boorsooyinka iskuulka kartoonada iyo alaabada kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida soosaarka Naqshadeynta: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, bacaha qoryaha, boorsooyinka taatikada ee militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho sumadeena, fadlan nala soo xiriir:adamdavis@fofrerbag.com
1. Soo bandhigida alaabta bacda dugsiga ee daabacan:
(1) Dharka kore ee shandadda iskuulka la daabacay wuxuu ka samaysan yahay 600D nylon Oxford maro. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka qoyan bacda. Isku-darkaani wuxuu leeyahay waxqabad ka wanaagsan biyaha oo aan fiicnayn iyo dhalaal sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(2) Dahaarka gudaha wuxuu ka sameysan yahay 210D nylon Oxford maro, kaasoo leh muuqaal dhalaalaya.
(3) Buuxinta gudaha waxay ka sameysan tahay suuf EPE ah oo laastik ah. Qalabkani waa mid khafiif ah, u adkaysi u leh shoogga, oo si wax ku ool ah u ilaalin kara waxyaabaha bacda ku jira.
(4) Jiinyeerka sheyga ayaa ah qaybta ugu muhiimsan. Tayada sheyga ayaa sifeeya heerka sheyga, sidaa darteed boorsadeena laptop-ka waxay isticmaashaa jiinyeerka YKK ee aadka loo yaqaan iyo sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee SBS.
(5) Shandadayada iskuulka ee daabacan waa kuwo neefsan kara, xirna u adkeysanaya, biyuhu diidayaan isla markaana culeyska yareyn kara. Waxay hanan kartaa laptop 15.6-inji ah iyo qalabka durugsan.
(6) Shandadayada iskuulka ee daabacan waxay leedahay awood balaaran waxayna ku haboontahay ardayda dugsiga sare iyo kuwa kuleejka. Waxaan sidoo kale u qaabeynay bac gudaha ah Ipad.
(7) Nidaamka Daabacaadda: kala-wareejinta kuleylka.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) bacaha dugsiga ee daabacan
Barashada, safarka, firaaqada, nashaadaadka kooxda
Waxaa lagu soo saari karaa iyadoo la beddelayo qalabka sida loogu baahan yahay
Boorso iskuul daabacan oo toosan
Dhererka 30cmX Width 22cmX Dhererka 45cm
Cabbirka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha
Hal badeecad oo ku jirta hal bac bac ah, 10 kumbiyuutar / kartoon
Habka baakadaha waxaa loo qaabeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha
Nooca wax soo saarka ee khuseeya
Waxay ka kooban yihiin buugaag, kiniinno, taleefannada gacanta, boorsooyin
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsooyinka iskuulka la daabacay
(1) Shandaddan iskuulka ee daabacan waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiiminta, nuugista shoogga, iska caabbinta, nolosha muddada dheer, shaqeynta badan, iwm.
(2) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan iskuulka lagu daabacay si aad si fudud ugu keydiso laptop-kaaga shaqada iyo qalabka agabka ah, sida kiiboodhka, jiirka, U diskiga, moobilka moobaylka, iwm inta lagu jiro shaqada, safarka, waxbarashada iyo waqtiga firaaqada
5. Xirxirida iyo rarida boorsooyinka iskuulka ee daabacan
(1) Qaybta iibka: midkiiba
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 48cm X 34cm X 12cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka
(3) faahfaahinta xirxirida: 50cm X 36m X 60cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh
(4) Qaabka gaadiidka: badda, hawada, dhulka. Waxaan dooran doonaa habka ugu habboon ee gaadiidka saadka.
(1) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamkani gebi ahaanba waa bilaash.
(2) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saarka ee alaabta dalabka ah waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro wax soo saarka, si aad u fahmi karto heerka amarka si dhakhso leh
(3) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh.
(4) Si adag u xakamee tayada wax soo saarka oo kuugu soo gudbi adiga oo leh heerka dhaafitaanka 100%
(5) Waxaan sameyn doonnaa wax kasta oo suurtagal ah si aan kuu badbaadinno kharashyada.
Q1: Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama soo saare?
Jawaab: Waxaan nahay warshadda
Q2: Muddo intee le'eg ayaa dhalmadaadu tahay?
Jawaab: Haddii ay keyd tahay, badanaa waxay qaadataa 3-5 maalmood. Ama, haddii aysan jirin tiro koob, waa 35-45 maalmood, iyadoo ku xiran tirada aad u baahan tahay. Markay tiradu badato, ayaa sii dheeraanaya wareegga waxsoosaarka.
S3: Ma bixisaa shaybaar? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
Jawaab: Haa, haddii tijaabooyinka ay keyd yihiin, laakiin xamuulka aan la bixin, waxaan ku bixin karnaa shaybaarro bilaash ah.
Q4: Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
A: <= 1000USD, 100% bixinta kahor
Jawaab: Haa, waxay kuxirantahay cabirka, farshaxanka iyo habka wax soo saar ee sheyga.
S6: Intee in le'eg tahay wareegga dhalmadaada?
(1) Waqtiga dirista muunadda: Kadib helitaanka amarka muunadda, bixinta saamiga waxay bilaabi doontaa tirinta. Muddada tijaabada ayaa qiyaastii ah 7 maalmood oo shaqo. Gobollo kala duwan ayaa leh waqtiyo kala duwan oo rar iyo xilliyo kala duwan oo qaadashada shay-baarka. Shaybaarkayaga caadiga ah ayaa la raraa iyadoo la adeegsanayo UPS. Iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, shirkadda saadka ee aad sheegto ayaa laguu diyaarin karaa gaadiid.
(1) Wareegga gudbinta wax soosaarka ballaaran: Kadib helitaanka qandaraaska wax soo saarka ballaaran iyo bixinta hore, waqtiga ayaa bilaaban doona. Wareegga wax soo saarku wuxuu ku saabsan yahay 45 maalmood oo shaqo.
S7: Maxay yihiin adeegyada oraah ee aad sheegto? Waa maxay muddada oraahdu? waa maxay habka loo sheegay qiima dhaca?
(1) Waan qiimeyn karnaa oo soo qaadan karnaa iyadoo ku saleysan sawirada, sawirada naqshadeynta (sawirada cad iyo sawirada 3D) ee aad bixiso, waxaanna bixin karnaa xalal xirfadeed iyo wax soo saar badan.
(2) Wareegga oraahda dufcaddu waa 2-3 maalmood oo shaqo. Hal shey ayaa la soo xigtay 12 saacadood.
Q8: Ma aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinno tijaabo ah? Sidee tayada wax soo saarkaagu yahay?
(3) Waxaan nahay soo saaraha boorsooyinka iskuulka Disney, boorsooyinka Wal-Mart, iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Bacda dugsiga la daabacay, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, la habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka ku jirta
Bacda iskuulka ee lugaha leh
Bacda iskuulka ee kartoonada